Walliigala – BIRMADDUU
November 6, 2020 July 20, 2021
Jireenya Maati, Walliigala
Namni sammuu fi qalbiin issaa nageenya qabuu hundi ijoollee ofii ni jaallata; ni mararsiifatas. Dhiigii ofi nama ta’ee arguun, yookaniis “ija ofii ijaan arguun” gammachuu dangaa hinqabne akka namaaf kennu abbaa fi haatii ijoollee gaarii godhanii beeku.
Hoogansa, Mullisa fi Ergaa, Walliigala
“Namni gowwaan, yaada aarii garaa isaatii hundumaa in dubata, namni ogeessi garu in obsa, of qabaas in dubbata” Fk. 29:11.
Ergaa gabaabaa yeroo fannifamuu fi du’aa ka’uu ilaalchisee, kessaa iyyuu madda aarii isa gooftaa Yesuusiin fannisiise.
Yeroo waa’ee firdii fi du’atti dabarfamee kennamuu Yesuus Kiristoos Wangeela kessatti dubbifanu, waanta gurguddaa lamatu seenaa sana keessa mul’ata. Aarii geggessitoota amantii, akkasumas saba isaan duuka jiranii fi soda warra aangoo qabanii ti.
Mullisa fi Ergaa, Walliigala
Yeroonn gooftaan Kenya Yesuus Kiristoos dhalatee, seenaa saba Isreal Kessaatti yeroon sun yeroo dukana’aa ture. Yerichii yeroo geggessitoonni amantii manaa Waaqayyoo kan dhimmaa angoo namaa tajaajiluu fi albadhuummaan guute, yeroo sabbi Israa’el ayyaana Waqayyoon jiraachuu fi fedha Waaqayyoo jalalaa fi marara garaa guutuu tajaajiluu dhiisee amantii seeraa kan soda fi fedha qalbii nama tajaajilu duukaa bu’ee ture.
Ergamaan Paulos yeroo waa’ee akeeka Waaqayyo fuula keenya dura kaa’e bira ka’uuf ka gochuun nu irra jiru dubbatu ergaa isaa gara warra Filiphisiiyus kessatti akka jedha: “Obboloota ko ani akka nama harka isaa keessa isa galfatetti of hin lakkaa’u. Hata’u iyyuu male. Waan tokko nan godha; wanta na booddetti hafe yaaduu dhiisee; wanta na dura jirutti nan hiixadha.” Fipl. 3:13
Pawuloos adeemsa amantii figicaa dorgommeen wal fakkeessa.
“Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa….” Filiphsiiyus 4:4
Phaawuloos ergaa isaa gara warraa Filiphisiiyus kana kessatti eggaa yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedhu maal jechuu barbaade laata? Jireemyi biyya lafaa hedduminaan dadhabbii fi sodaan kan guuteedha. Namin wanta amma fuula isaa jiru irra kan hafe kan boorrii fi borduubaa kallattin qaarsisee guutuutti arguu hin danda’u.
“Namoonni hojii kee isa gaarii arganii abbaa keessan isa Waaqa irraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa’ifu!”
Nuti ijoollee tasaa miti
Waaqayyo akeekaan jireenya biyya lafaa kana keessa nu kaa’e. Jireenyi ilma namaa tasa hiiika tokko malee ardii kana irra hin kayyamne. Macaafa Qulqulluu irraa akkas jedha; “Ani Waaqayyo kanan si uume, gadameessa haadha kee keessatti kanan si tolche, kanan si gargaarus…” (Isa.
Akeeki Waaqayyo nuu hundumaaf qabu waa tokko, innis jireenya. Amma yeroo fuula isaa dura deddebinu kanatti jireenya guutuu, jechuun toles, yoo ka bades ta’e, yeroo amma qabnu kanatti ija keenya abdii Waaqayyo nu fuldura kaa’e irra keyyanne, battala ammatti garu guututti akka jiraanuudha.
Jireenya Jiraachuu fi jireenya dhimma baasu jirachuun waa lama. Duuchadhumatti jirenya jiraachuun, maataan isaa iyyuu jireenya akka ta’e waanta mamsiisu hin qabu. Hata’u iyyuu malee daaqaan jireenya nuti jiraannu hiikaa fi gatii jireenya murteessa. Gatii fi hiikaa kana egaa dhimma baasaa jireenyichaa jenna. Jireenyi keenya jireenya irra darbee dhimma baasuu qaba. Dhimma hawaasa keenyaaf, dhimmaa maatii keenyaaf, akkasumas dhimmaa namoota naannoo keenya jiran maraaf.
Maatii Kiristiyaanaa jechuun maal jechuudha? Maatii warra kan biraatti maaltu adda baasa? Maatin Kirsityaanaa maati Waaqayyooti, fayyinaa fi araara Waaqayyo jala ka jiraattan fi deddebi’anii dha. (Ef. 2: 19) Warra, biyyaa lafaa, qulqullinaa fi araara Waaqayyoo jala hin jiranne hundumaa irra adda. Tarii maatiin kiristiyaanaa eenyu jenna ta’a.
Abdiin fufiisaa fi hara’au yookaan foya’uu jireenyaa ka ilama nama mara biyya lafaa kana irratti ka hiikaa fi bifa itti godhuudha. Namni abdii hin qabnne jireenya bushaa’aa ka bifa hin qabnne, jireenya dadhabaa of booda ilaaluu fi komeen guute jiraata.